यसकारण बाबुरामलाई पछ्याउन सकिएन् –नेता खगराज भट्ट
पूर्ववरिष्ठ नेता डा.बाबुराम भट्टराईले एमाओवादी पार्टी परित्याग गरेपछि उनका समर्थकहरुले क्रमैसँग त्यही बाटो पछ्याउँदै पार्टी परित्याग गरिरहेका छन् । नयाँ शक्ति बनाउने भन्दै एमाओवादीलाई ‘भत्किएको घर’को संज्ञा दिएर बाहिरिनेहरुको सम्भावित सूचिमा सेती–महाकाली क्षेत्रका लोकप्रिय युवा नेता खगराज भट्टको नाम पनि अग्रपंक्तिमा थियो । तर उनले रातारात बाबुराम हिँडेको बाटो गलत भयो भन्दै उनलाई पछ्याउन नसकिने निर्णय सार्वजनिक गरे । त्योसँगै सबैतिर नयाँ नेतृत्व तोकेको डा.बाबुरामको नयाँ शक्ति अभियानले सेती–महाकाली क्षेत्रमा कुनै नेतृत्व तोक्न सकेको छैन । शुक्रबार बिहान एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटबाट भर्खरै बाहिरिएका नेता भट्टलाई साझापोस्टले राजधानीको दरबारमार्गमा फेला पार्यो । प्रस्तुत छ, नेता भट्टको बाबुरामलाई पछ्याउन नसकिने र एमाओवादीमै बस्ने भन्ने निर्णयको सन्दर्भमा गरिएको कुराकानी–
माओवादी आन्दोलनमा तपाई लामो सयम डा.बाबुराम भट्टराई पक्षीय नेताको रुपमा चिनिएर पनि अहिले एकाएक उनको साथ छोड्ने निर्णय गर्नुभएछ नि !
विगत २२/२५ वर्षको राजनीतिक जीवनमा प्रायः सम्पूर्ण क्षण, हरेक आरोह अवरोहमा म बाबुरामजीसँग रहेँ । तर उहाँसँग लामो समयसँगै रहनु भन्नुको अर्थ वहाँका हरेक कुरामा हाम्रो सहमति र सन्तुष्टि थियो भन्ने होइन । तर बाबुरामजी आफैंमा शान्ति र संविधानको पक्षधर, एउटा नैतिक आचारणयुक्त नेपाल राष्ट्रले खोजेको, समृद्धि र विकासको भिजन र मिसन भएका नेता हुन् । यसकारण उनी समकालीन राजनीतिमा सबभन्दा सक्षम र माओवादी आन्दोलनको कम्युनिष्ट धारभित्रको जडसुत्र, संकिर्ण र यान्त्रिक चिन्तनका विरुद्ध गतिशील ढंगले माक्र्सवादलाई बुझ्नुपर्छ भन्ने भएको कारणले वहाँलाई साथ दिएका हौं । तर अहिले आएर हेर्दा उहाँले जुन समय र सन्दर्भमा जुन विधि र प्रक्रियामा उहाँले कदम चाल्नुभयो, यो कुनै पनि अर्थमा सही सावित हुनसक्दैन । यसअर्थमा हामी बाबुराम हेरेर होइन, बाबुरामको विचार हेरेर पछाडि लागेका हौं । आज आफैंले भनेको शान्ति र संविधानको लाइनलाई संस्थागत गर्नुपर्ने बेलामा पार्टी छाडेर बाहिर निस्कुनभयो । आफैंले भनेको शान्ति, समृद्धि र विकासलाई यही पार्टी रुपान्तरण गरेर लैजानु पर्नेमा वहाँ बाहिर निस्कुनभयो । त्यसरी हेर्दा हामी बाबुरामका कार्यकर्ता हौं, कारिन्दा होइनौं । यसअर्थमा अहिले हामीले बाबुरामजीलाई समर्थन गर्न सकिएन । यसको अर्थका सबै वहाँको कुरामा विमति छन् भन्ने होइन । वहाँका कैयौं समर्थन गर्नुपर्ने पक्षहरु छन् । तर अहिलेकै अवस्थामा यो इस्यूमा वहाँलाई साथ दिन सकिएन ।
एमाओवादी बिग्रिएको छ, भत्किएको छ, यहाँभित्र विग्रह छ । संगठनहरु क्षतविक्षत भएका छन् । कार्यकर्ताहरुको चिल्लीबिल्ली छ ।
बाबुराम त भत्केको घर भनेर गए । के तपाईंलाई लाग्छ, यही एमाओवादी फेरिएर वर्तमान युगको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ?
अब बाबुरामले एमाओवादीलाई भत्केको घर भन्नुभएको छ तर वहाँ त आफ्नै खुल्ला आकाशमुनी बस्नुपर्ने स्थिति बनेको छ । अहिलेको स्थितिलाई हेर्दा । भत्केको घरको कुरा गर्दा त्यसलाई नै भत्काएर नयाँ बनाउने हो वा त्यसलाई नै मर्मतसंभार गरेर बनाउने हो । नयाँ घर पनि नयाँ जगबाट बन्ने हो । यसकारण पुरानो घर बनाउने कि नयाँ घर बनाउने भन्ने वहाँको तर्क सह्य हुन सक्दैन ।
दोस्रो, आज माओवादी भत्किएको अवस्थामा छ भने वहाँले एमाओवादीको दोस्रो नेतृत्वको रुपमा यो घर भत्किँदासम्म के हेर्नुभयो ? भन्ने प्रश्न पनि वहाँको अगाडि तेर्सिन्छ । त्यसैले जहाँसम्म माओवादीलाई वहाँले टिप्पणी गर्नुभएको छ, ती केही सही पनि छन् । एमाओवादी बिग्रिएको छ, भत्किएको छ, यहाँभित्र विग्रह छ । संगठनहरु क्षतविक्षत भएका छन् । कार्यकर्ताहरुको चिल्लीबिल्ली छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा वैचारिक अस्पष्टताहरु छन् । यी कुराहरु चुनौतीको रुपमा छन् । यसलाई अब हाम्रो केन्द्रीय समितिले कसरी फेस गर्दछ भन्ने कुराले एमाओवादीको भविष्य निर्धारित गर्दछ । आशा गरौं, अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । बाँकी व्यवहारमा त केन्द्रीय समितिको बैठकपछि नै भन्न सकिन्छ ।
यसकारण यिनै पात्रहरुबाट केही नयाँ बन्न सक्ने आधार कति सम्भव हो, त्यो कुरा वहाँले पनि प्रष्ट पार्न सक्नुभएको छैन ।
बाबुरामजीले त एमाओवादी मात्र होइन, पुराना सबै पार्टीहरुले यही रुपमा नयाँ युग र आवश्यकताको नेतृत्व गर्न सक्दैनन् भनिरहेका छन् । तपाई फेरि यतै फर्कनुभयो । यहाँबाट बाबुरामजीलाई तपाईंको जवाफ के हुन्छ ?
विद्यमान पार्टीहरुले आफूलाई रुपान्तर र परिमार्जन नगर्ने हो भने र देश र जनताको गतिशील चेतनालाई समात्ने होइन भने बाबुरामजीले भनेको जस्तै यिनीहरु नेतृत्व गर्न असफल हुन्छन् । बाबुरामजीको कुरामा एकहदसम्म सहमत हुनसकिन्छ । तर यही एकीकृत माओवादी पुरानो भएर कामै नलाग्ने भएको हो वा रोग लागेर उपचार गर्नै नसक्ने भएको हो ? भन्ने खालको अवस्था हो । अरु हकमा पनि । दोस्रो यी सबै पुराना दलहरुको विकल्पमा बाबुरामजीले बनाउन खोज्नुभएको नयाँ शक्तिको वैचारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार के हो ? यी सबै कुरा उहाँले पनि प्रष्ट पार्नुभएको छैन ।
यस्तैगरी जेजस्ता व्यक्तिहरुसँग उहाँले अन्तरक्रिया गरिरहनुभएको छ, पार्टीभित्रका पनि उही पुरानै मानिसहरु हुन्, पार्टी बाहिरका पनि जो मानिसहरुसँग उहाँले कुरा गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु पनि राज्यसत्तासँग कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका पात्रहरु हुन् । यिनीहरु नेपाललाई यहाँसम्म पुर्याउन कुनै न कुनै हिसाबले नकरात्मक हिसाबले भूमिका खेलेका पात्रहरु पनि हुन् । यसकारण यिनै पात्रहरुबाट केही नयाँ बन्न सक्ने आधार कति सम्भव हो, त्यो कुरा वहाँले पनि प्रष्ट पार्न सक्नुभएको छैन ।
यसकारण, पूराना पार्टीहरुले आत्मसमिक्षा गर्दै आफूलाई रुपान्तरण गरेर जान सक्ने हो भने मलाई लाग्छ, जसरी इतिहासमा हरेक चुनौतीपूर्ण मोडहरुमा अहिलेका दलहरुले संसारलाई नै आश्चर्यचकित तुल्याउने गरी सफल पारे, यही स्पिरिटलाई समाएर अगाडि बढ्न सक्ने हो भने उहाँहरुले नयाँ परिस्थितिको पनि नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ ।
अब सबै पार्टी पुराना भएर राष्ट्र बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने त्यसको अंश उहाँले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
बाबुरामजीले भनेजस्तै गरी अहिले जुन गठबन्धन सरकार बनेको छ, हुलका हुल उपप्रधानमन्त्रीहरु बनिराछन्, यसले त उहाँकै आरोपलाई बढी पुष्टि गर्न लागेको होइन र ?
अब एउटा कुरा के हो भने अहिलेका समकालीन नेता र पार्टीहरु टेस्टेड हुन् र बाबुरामजी पनि । त्यसकारण अरु सबैलाई धारे हात लगाएर जानेक्रममा अहिलेको राजनीतिक चुनौती जुन प्रकृतिको छ, उहाँको पनि भूमिका छ । उहाँ त प्रचण्डभन्दा लामो समय प्रधानमन्त्री हुनुभयो, संवैधानिक समितिको सभापति हुनुभयो । एउटा वरिष्ठ नेताको रुपमा, जनयुद्धको पहिचानको रुपमा स्थापित भए । अब सबै पार्टी पुराना भएर राष्ट्र बनाउने भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् भने त्यसको अंश उहाँले लिनुपर्छ कि पर्दैन ? उहाँ पनि यो प्रक्रियाको निमित्त पात्र हो कि होइन ? यसरी हेर्दा सबै दोष अरुको टाउकोमा थोपर्ने र आफू पानीमाथिको ओभानो बन्ने कुरा सह्य हुनसक्दैन ।
एउटा चुनौती त दिएर गएका छन् बाबुरामले । त्यो चुनौतीको सामना गर्न अब एमाओवादीले के गर्दछ ?
बाबुरामजस्तो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान भएको, बौद्धिकता भएको र आर्थिक सामाजिक विकासको अवधारण बोकेको नेता, जुन पात्रहरुको नामबाट माओवादी आन्दोलनको पहिचान हुन्थ्यो, कुनै दिन जनताले एउटा सपनाको पात्र मानेको नेता पार्टी छाडेर जाँदा माओवादी पार्टी र सिंगो नेपाली राजनीतिलाई प्रभावित गर्ने कुरालाई अन्यथा मान्न सकिन्न । तर यी चुनौतीलाई एमाओवादी पार्टीले इतिहासका विभिन्न चरणहरुमा पटक पटक बेहोर्दै आइरहेको छ । कहिले यो भन्दा बढी पनि छन्, कहिले योभन्दा कम पनि छन् । वैद्यले पार्टी फुटाउँदा पनि हामीले एउटा चुनौती व्यहोर्यौं । जनयुद्धको सुरुमा पार्टी फुटाएरै यो अभियानको सुरु गरेको हो । त्यसका बीचमा पनि कयौं आशालाग्दा कमरेडहरुले पार्टी छाडेर जानेक्रममा पनि चुनौती व्यहोरियो । हामीले यदि राजनीतिक ढंगले नेपाललाई नयाँ नेतृत्व गर्ने हो भने भित्र र बाहिरका सबै चुनातीहरुलाई सामना गर्न हामी तयार हुनैपर्दछ । त्यो आँट र आत्मविश्वास अनि विवेक पुर्याउन सक्ने हो मलाई विश्वास छ, हामीले यो चुनौती सामना गरेर अगाडि पुग्न सक्छौं ।
खासगरी राजनीतिकरुपमा पनि एमाले एमाओवादीबीचमा एकरुपता भएको अवस्थामा त्यो असम्भव नै छैन तर धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।
बाबुरामले छाडेपछि एमाओवादी र एमालेका नेताहरु नेपालमा कम्युनिष्ट केन्द्र बनाउने भनेर बहसमा उत्रिनुभएको पाइएको छ । के यस्तो सम्भावना बढिरहेको हो र ?
अब हामी नेपालका कम्युनिष्टहरुको जुन राजनीतिक सांस्कृतिक अवस्था छ, त्यो कोणबाट हेर्ने हो भने प्रत्येक पार्टीभित्र गुट र गुटभित्र पनि उपगुटहरु हुँदै आएको यथार्थ हामीबाट छिपेको छैन । एकता र विभाजनका श्रृंखलाहरुको पनि तितामिठा थुप्रै अनुभवहरु छन् । यो पृष्ठभूमिका एकता धेरै बाधक र चुनौतीहरु छन् । इगोका समस्या होलान्, एजेण्डाका समस्या होलान्, विचार र व्यवहारका समस्या होलान् । यसकारण यो त्यति सहज छैन । तर फेरि एउटा लामो श्रृंखलाको अनुभव, हण्डर, ठक्कर र परिणामपछि अब नयाँ तरिकाले गर्नुपर्छ भन्ने कुराको सोच पनि पैदा भइरहेको छ । खासगरी राजनीतिकरुपमा पनि एमाले एमाओवादीबीचमा एकरुपता भएको अवस्थामा त्यो असम्भव नै छैन तर धेरै चुनौतीपूर्ण छ ।
ए त्यसो भए, बाबुरामले दिएको चुनौती उनैलाई फिर्ता गर्दै यही एमाओवादी फेरेर बाबुरामले भनेभन्दा नि राम्रो र नयाँ पार्टी बनाउनुहुन्छ ?
मलाई के लाग्छ भने माओवादी पार्टी रुपान्तरण गर्ने र राष्ट्रलाई रुपान्तरण गर्नेकुरा असाधारण कार्यभार हुन् । त्यसकारण अहिले तपाईसँग सजिलै रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने कुराले विषयको गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्दैन । अजंगको चुनौती छ । महान सम्भावना र गम्भीर चुनौतीको क्षण हो यो । यसअर्थमा हामी चुनौतीलाई सामना गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको हुनाले आजसम्मको प्रचुर अनुभवको आधारमा भविष्यमा चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ ।